Ikona ekhangayo kunye nombono ophefumulayo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStéphanie
Le indlu le ndawo ogqibeleleyo ukuba kude nentsapho okanye abahlobo kwikona encinane eparadesi ecaleni St. Lawrence umlambo kunye omangalisayo beach A view omangalisayo, ivenkile lula, a sidliwe kunye yokudlalela. Sakufutshane, A indlu encinane bekhululekile , akukho inkwenkwezi 5 etofotofo nokufikelelekayo kwaye ibekwe phambi kwe elwandle, la magumbi kwigumbi elingaphantsi intuthuzelo engakumbi ngeemini ezishushu, umoya kumgangatho woku-1, makhe ngokwakho, anilume;) citq: 301910
*** UHLAZIYO OLUNINGI OLUNCINANE lwenziwe, iifoto ziya kutshintshwa zibe ngcono *** I-chalet encinci enomtsalane ehonjiswe ngemibala yolwandle. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawari. Iifestile ezinkulu ukuze ubone imbonakalo yolwandle, imidlalo yebhodi, iTV ye-intanethi, ibhasikithi yepiknikhi ekufutshane neendawo zakho zokuhlala elunxwemeni. Izitulo zelanga kunye nekona encinci yangasemva yokutya, itafile yepikiniki kunye nekona encinci yokwenza imililo. Yile nto ikulindeleyo, le ayisiyiyo i-chalet yeenkwenkwezi ezi-5 kodwa unazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale kamnandi.
Ipaki yabantwana kwimizuzwana engama-30, iCanteen, iivenkile ezi-2 eziluncedo, inkampu, indawo yokumisa, indlela yebhayisekile ekupheleni kwePointe Paradis, itafile encinci elunxwemeni lwamanzi kwindawo kawonke-wonke kunye nepavilion encinci kwindawo yoluntu. Indlela yokuhamba kunye nendlu encinci kwindawo yoluntu.
Ndizakufumaneka ngamaxesha onke ngesms nangefowuni kwaye ndingafika ngaphandle kwengxaki. Sibhala ku-airbnb nange-sms ukuba unomdla kule ndlela yonxibelelwano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pointe-Lebel